HomeSafe Apk Dhawunirodha Ye Android [Chengetedzo Tool] - Luso Gamer
Imba inzvimbo iyo vanhu vanofarira kugara uye kunakidzwa nenguva yavo yemahara vachinakidzwa nezvivakwa. Dzimwe nguva zvivako zvinodhura izvi zvinova zvinokwezva meso kuumbavha. Saka tichifunga nezve kuchengetedzeka kwemba uye kuchengetedzeka kwevanhu pano isu tinopa HomeSafe Apk.
Iye zvino kubatanidza iyo chaiyo application mukati me smartphone. Inogona kubvumidza vashandisi venhare kunakidzwa nepamusoro zvivakwa pane yavo Android smartphones mahara. Zvese zvavanoda ndezvimwe zvakakosha zvitupa uye masisitimu ekutanga.
Pasina kuita izvi zvigadziriso, hazvigoneke kuzadzisa zvinangwa. Saka imi varume makagadzirira kushandisa mukana uyu mukuru. Wobva wadhawunirodha uye isa yazvino vhezheni yeHomeSafe App mukati meandroid smartphone.
Chii chinonzi HomeSafe Apk
HomeSafe Apk chishandiso chepamhepo Android chakagadzirwa neSwann Communications. Chikonzero chekugadzirisa chikumbiro ndechekupa online yakachengeteka system. Ikoko vanhu vanogona kutarisa pamwe nekutarisa kuchengetedzwa kwemba.
Kare vanhu vaihaya murindi akakosha kuti achengetedze dzimba. Zvisinei, nekufamba kwenguva vanhu vanotanga kufunga nezvazvo semutoro wakawedzerwa. Uko vanhu vanofanira kubhadhara mari yakasiyana pamwedzi wega wega kune murindi kuitira kuchengetedza.
Iyi gadziriro yekare inoita seisina kunyatsoshanda uye inodhura. Saka nyanzvi dzakauya nehunyanzvi hweCCTV ine masystem akawanda anotyisa. Uko kuchengetedzeka kwemba kunoratidzika kunge kunoshanda uye kwakachengeteka. Nekudaro, vanhu vanogara vachinetseka nezve mashandiro ehurongwa.
Nekuti kumhanya hurongwa hwese kunoda simba rekuchengetedza system. Kunyangwe kana varidzi vasipo, iyo system inogona kupinda muoffline mode nekuda kwekumwe kukanganisa kwemukati. Ikozvino kuona nekugadzirisa zvese izvo nyaya uri kure zvinogoneka nekuisa HomeSafe Dhawunirodha.
zera 19.28 MB
Package Zita com.homesafeview
Kuisa imwe chete application mukati meAndroid smartphone kunobvumira vashandisi. Kubatanidza pamwe nekugadzirisa iyo DVR neapp. Kana iyo gadziriso yapera, ipapo vashandisi vanogona kukwanisa kuwana yakaiswa CCTV Kamera uye nekutarisa iwo nenguva.
Zvinoreva kuti ikozvino vashandisi havambofa vakafanirwa kunetseka nezvekushanda uye nguva yekuona. Nekuti kudzvanya bhatani rimwe chete kunopa mukana wakananga kuDVR yeCCTV uye tarisa zviri nyore mamiriro epamba. Rangarira iyo inotsigirwa sisitimu inopa yemhando yepamusoro mifananidzo.
Mukati mekushandisa, aya akapatsanurwa mapoka anowedzerwa ane zita rePlay Back, Rekodha uye Mifananidzo. Iyo Playback sarudzo ichabatsira mukuona kurekodha zvakadzama. Iyo yekurekodha chikamu ichabatsira mukutanga iyo yekurekodha modhi nekudzvanya kumwe chete.
Kunyange avo vanonzwa vakasununguka kutora mifananidzo yakananga. Unogonawo kuita izvozvo nekushandisa application. Kusvika ikozvino anopfuura gumi nematanhatu kamera yekutsigira sarudzo iripo yekusarudza. Kunyangwe vagadziri vari kushanda vachienderera mberi kuwedzera dzimwe sarudzo dzekutsigira.
Iwo akagadziridzwa maficha uye sarudzo dzinogona kuwanikwa kushandisa mumazuva anouya. Saka iwe uri kunyanya kunetseka nezvekuchengetedzwa kwemba uri kunze. Zvadaro tinokurudzira avo kurodha HomeSafe Android uye tarisa pamwe nekutarisa kumba kure.
Kuisa iyo app kunopa akawanda-rutsigiro.
Iko vashandisi vanokwanisa kudzora CCTV vari kure.
Iyo app inowirirana nemhando dzakasiyana dzeDVR.
Kunyange vagadziri vari kushanda nguva dzose.
Kuita kuti ienderane nemimwe michina.
A live rekodhi sarudzo inowedzerwa.
Mufananidzo wekutora sarudzo inowanikwawo kushandisa.
Rekodhi yezwi inoshanda chete kana maikorofoni yakaiswa.
Maitiro ekurodha HomeSafe Apk
Kunyangwe iyo yazvino vhezheni yekushandisa ichisvikika kuwana kubva kuPlay Store. Nekudaro, nekuda kwezvimwe zvinhu zvakakosha, vazhinji vashandisi veandroid havakwanise kuwana yakananga Apk faira. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veandroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanisi kuwana mafaera?
Kana iwe wakavhiringika uye uchitsvaga yakanakisa imwe sosi yekurodha. Ipapo isu tinokurudzira avo kuwana webhusaiti yedu uye dhawunirodha yazvino Kumba Yakachengeteka Apk. Izvo zvinosvikika kuwana nekudzvanya imwe sarudzo yevashandisi veandroid.
Mapurogiramu akadaro echitatu anotsigirwa anoonekwa seane njodzi kuisa. Nekudaro, chigadzirwa chatove chave kuratidzwa pane play store. Kuvapo kwechishandiso pamusoro pechitoro chekutamba kunoratidza iyi yakanaka vhoti yekuvimba. Saka isu takatoisa iyo app uye hatina kuwana dambudziko rakakura.
Rangarira kune mamwe maturusi ekubatsira eandroid akaburitswa pawebhusaiti yedu. Kuisa uye kuongorora izvo mamwe maturusi ndapota tevera zvinongedzo. Ndivo Mbavha Guard Apk uye Nic VPN Beta Apk.
Saka unovaka imba yako nekushongedza kunodhura. Asi gara uchinetseka uchibuda mumba nekuda kwekuchengetedzeka. Ipapo usazvinetse nekuti nhasi pano taunza HomeSafe Apk. Kuburikidza neapp iyi, vashandisi veandroid vanogona kutarisa pamwe nekutarisa CCTV vari kure.
Categories Apps, Tools Tags HomeSafe Android, HomeSafe Apk, HomeSafe App, HomeSafe Download Post navigation